Kwixesha lasemva kobhubhane, gxila kwindlela entsha yemethi yemoto
Ukuqhambuka kwe-COVID-19 kwi-2020 kwanyanzela isixeko ukuba sicinezele iqhosha lokuphumla. Emva kobomi obude bekhaya kunye neendaba ezingenakubalwa malunga nokulwa ubhubhane, wonke umntu uneengcinga ezintsha kunye nokuqonda kobomi nobomi. Kukho ingqalelo engakumbi kwimpilo.
Imoto "likhaya lesibini" lomthengi, kwaye impilo yezinto zemethi yemoto imisela umgangatho wobomi babantu.
Emva kokuqhambuka kwe-COVID-19, nokuba yingxaki yevumba lemoto ekudala ikho okanye ingxaki yokuhlanjululwa komoya, i-antibacterial kunye ne-anti-virus ziye zajolisa kubathengi. Oku kuya kuba sisalathiso esitsha "sempilo yemoto enempilo kunye nendalo".
Nangona ubhubhane uye wehla, unefuthe elikhulu kubomi bethu: kwelinye icala, ulwazi lokusebenzisa kwabathengi lukhule kancinci. Ngaphambi kobhubhane, wonke umntu wayenike ingqalelo encinci kwiinkalo ezininzi. Uninzi lwazo luqwalasele kuphela uphawu "olubonakalayo" kunye noyilo. Abathengi "kwixesha lasemva kwesifo" abachaphazeleka sisifo sele beqalisile ukuba neemfuno eziphezulu "zezinto ezingabonakaliyo" ezinje ngokhuseleko kunye nomgangatho. Kwelinye icala, umxholo wokuhamba okunempilo usekwe nzulu ezintliziyweni zabantu. Ukongeza ekususeni imaski, ukuqhuba imoto yabucala kuye kwaba ngumkhwa wokuhamba usempilweni kubantu abaninzi.
Ngokophando olwenziwe ngu-Cox Automotive, isinye kwisithathu sabanini beemoto siya kuthathela ingqalelo "umgangatho womoya" wesithuthi xa uthenga imoto kwixa elizayo. Kuthathelwa ingqalelo ukwanda kweemfuno zeemarike kwixesha elizayo, siqaphele ukuba abathengi abaninzi nangakumbi banomdla ngakumbi kwimathiriyeli yomphezulu wemoto. Ukusetyenziswa kwezinto ezingenatyhefu, ukujongana nokusingqongileyo kunye nezinto zokulwa neentsholongwane kwiimethi zemoto yindlela eqhelekileyo yokuqinisekisa impilo kunye nokhuseleko lweemoto kwixesha lasemva kobhubhane.
Ekuqaleni kwesiseko sophawu, i-DEAO yayikholelwa ekubeni ukhuselo lokusingqongileyo yeyona nto iphambili ekufuneka yenziwe ukuze kufezekiswe ixabiso leemethi zemoto emva kwentengiso. Ngokukodwa kwixesha elikhethekileyo lexesha lasemva kobhubhane, iphakamise ukulandela uhlaza, ukhuselo lokusingqongileyo, impilo kunye nokhuseleko kwinqanaba elingazange libonwe.
Ngentliziyo yokusingqongileyo, sizibophelele kwimpilo yemethi yemoto.
Imethi yemoto yemveli isebenzisa izinto zesiponji zemichiza. Isiponji yimveliso yemichiza ethintelwe ngqo kwi-benzene ye-TDI, i-cyanide, iarhente enegwebu kunye nezinye iikhemikhali.
I-TDI yimichiza enetyhefu engenabungozi kwindalo ngexesha lenkqubo yemveliso. Ukongeza, ikhupha izinto eziyityhefu nezicaphukisayo ngexesha lokusetyenziswa kwayo, ezonakalisa indlela yokuphefumla komntu kwaye ihamba nomngcipheko womhlaza. Yimveliso engavumelekanga ngexesha leOlimpiki.
Idityaniswe nolwakhiwo lobusi besiponji, umbutho uqinile kwaye awangeni moya. Nje ukuba amanzi angene kwimasti yemoto yesiponji, akukho lula ukomisa, kwaye kulula ukubamba ukungcola kwaye ube yindawo yokuzalisela iintsholongwane.
I-Deao TPE inobuhlobo bemoto ekuqhekezeni izixhobo zemveli, yamkela izixhobo ezitsha zokhuselo lokusingqongileyo ezaziwa ngokukodwa ngabavelisi bezithuthi eziphezulu, ezikhuselekileyo nezingatyhefu, ayiqulathanga izinto ezinobungozi ezinje nge-formaldehyde kunye ne-toluene, inentsebenzo ezinzileyo, kwaye ngokufanelekileyo isombulula ingxaki yokungena kwamanzi kunye nobungqina bokufuma.
Ukusuka kwimethi yemoto ebonakalayo ukuya kumatethi emoto amahle ukuya kwimethi yemoto esempilweni, le yinto engenakuphepheka kuphuhliso lweenyawo, kwaye ikwayimbono yexabiso lebrendi ebesililandela.